वि. सं. २०७८ असार ८ गते, मंगलवार - Enepalese.com
वि. सं. २०७८ असार ८ गते, मंगलवार
इनेप्लिज २०७८ असार ८ गते १३:०२ मा प्रकाशित
२०७८ असार ८ गते, मंगलवार, २२ जुन २०२१। ज्येष्ठ शुक्लपक्ष, द्वादशी तिथि (प्रातः ७ः४२ बजेदेखि त्रयाेदशी), विशाखा नक्षत्र (१२ः३५ बजेदेखि अनुराधा), चन्द्रराशि– तुला, प्रातः ७ः०० बजेदेखि वृश्चिक।
आज तपाईं तनाउमुक्त महसुस गर्नुहुनेछ र रमाइलो गर्ने मुडमा हुनुहुन्छ। आफ्नो जोडीसँग राम्रो समझदारीले घरमा शान्ति, संवृद्धि र आनन्दमा ल्याउँछ। लामो समयसम्म एक्लो काटेको समयको अन्त भयो – तपाईंले आफ्नो जीवनसाथी पाउने समय आएको छ। आफ्नो जोडीलाई हल्का नसोच्नुहोस्। आफ्नो जोडीले तपाईंलाई केही नराम्रा कुराहरूका साथै तपाईंको किशोर समयको याद दिलाउने छन्।
आफ्नो झगडालु व्यवहारलाई नियन्त्रणमा राख्नुहोस्, किनकि यसले तपाईंको सम्बन्धलाई स्थायी रूपमा बिगार्न सक्छ। तपाईंले खुल्ला मन लिएर र पूर्वाग्रह हटाएर यसलाई जित्न सक्नुहुन्छ। आज तपाईंले घरमा अरूलाई अपमान गर्ने प्रयास गर्नु हुँदैन र आफ्नो परिवारको आवश्यकता अनुकूल हुनुपर्छ। तपाईं एक पटक आफ्नो जीवनको प्रेम भेटेपछि, अरू केही आवश्यक पर्ने छैन। तपाईंले आज यो सत्यको महसुस गर्नुहुनेछ। आज तपाईं रोशनीमा हुनुहुनेछ – र सफलता तपाईंको सामर्थ्य भित्रै छ। तपाईंलाई आफ्नो सम्बन्ध त्याग गर्नु झैं लाग्ने धेरै झगडाहरू हुनेछन्। तर, त्यति सजिलै सम्बन्ध त्याग नगर्नुहोस्।
तपाईंको धैर्यलाई लगातार प्रयासको साधारण अर्थमा र समझसँग राख्नुहोस् जसले तपाईंको सफलताको ग्यारेन्टी रहनेछ। तपाईंले मित्रहरूबाट सहयोग पाउनुहुनेछ – तर सावधानीसँग बोल्नुहोस्। तपाईंसँग बिताएको राम्रो समयको याद दिलाएर आफ्नो मित्रताको नवीकरण गर्ने समय। स्थापित र भविष्यको रुझानमा तपाईंलाई केही दिन सक्ने मान्छेसँग आबद्ध हुनुहोस्। आफ्नो जीवनसाथीले तपाईंलाई सबैभन्दा खुशी व्यक्ति बनाउन आज धेरै प्रयास गर्नेछन्।
तपाईंलाई आफ्नो काम मन लगाएर गर्न गाह्रो पर्नेछ – किनकि तपाईंको स्वास्थ्य आज राम्रो हुनेछैन। यो आफ्नो तर्फबाट धेरै प्रयास नगरिकन अरूको ध्यान आकर्षित गर्ने राम्रो दिन हो। आफ्नो बोलीको नियन्त्रण गर्ने प्रयास गर्नुहोस् किनकि तपाईंका कठोर शब्दले अशान्ति फैलाउँछ र आफ्नी प्रियतमासँगको सम्बन्ध बिग्रिन्छ। तपाईंको जोडीलाई तपाईंको पुरानो गोप्य कुरा थाहा लाग्नाले केही चोट पर्न सक्छ।
आराम महत्त्वपूर्ण भएको दिन – हालैमा तपाईंले धेरै मानसिक दबाबको सामना गर्नुभएको छ – त्यसैले मनोरञ्जन र आमोद-प्रमोदले तपाईंलाई आराम गर्न मद्दत गर्नेछ। तपाईंको विशेष गरी प्रेम र ध्यान गर्ने मान्छेसँग व्यावहारिक हुने प्रयास गर्नुहोस्। कसैको नयाँ रोमान्सले तपाईंको आत्माको उत्थापन गर्दछ र तपाईंलाई खुसीको मुडमा राख्छ। तपाईं धेरै दिनदेखि काममा संघर्ष गरिरहनु भएको थियो भने, यो एउटा राम्रो दिन हुनेछ। आज गरेको निर्माण कार्य तपाईंको इच्छा अनुसार पूरा हुनेछ। तपाईंलाई आफ्नो जोडीले विशेष ध्यान दिन सक्ने सम्भावना देखिन्छ।
भीड बसमा यात्रा गर्दा रक्तचापका विरामीहरुले उनीहरूको स्वास्थ्य बारे अतिरिक्त ध्यान दिनुपर्छ। कसैका लागि – परिवारमा नयाँ सदस्यको आगमनले उत्सव र पार्टी ल्याउँछ। सेमिनार र प्रदर्शनीहरूले तपाईंलाई नयाँ ज्ञान र सम्पर्क प्रदान गर्नेछ। आज तपाईंको वैवाहिक जीवनको लागि संगै खाएर शुभ रात्री बिताउने अपेक्षित छ।